Xisbiga KULMIYE oo si Rasmi ah u Daah-furay Barmaamij-siyaasadeedka Cusub ee uu Doorashada ku Galayo. |
Xisbiga KULMIYE oo si Rasmi ah u Daah-furay Barmaamij-siyaasadeedka Cusub ee uu Doorashada ku Galayo.
Qodobada uu ka koobanyahay barmaamij-siyaasadeedka KULMIYE u soo bandhigay shacabka + nuxurka khudbadihii Madaxweynaha Qaranka iyo Murrashaxa Madaxweynaha xisbiga
Hargeysa(GNN):-Xisbul-xaakimka haya talada dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee KULMIYE, ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay barmaamij-siyaasadeedka cusub ee uu ku galayo doorashada Madaxtooyada ee u qorshaysan inay dalka ka qabsoonto 13-ka bisha November ee sanandkan 2017, si uu mar kale ugu guulaysto maamulka talada waddanka.
Arrimaha Bulshada; kaas oo ay hoos imanayaan qodobo ay ka mid yihiin, Waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha, beelaha laga tirade badanyahay, haweenka, dhallinyarada, horumarinta dhaqaalaha dhallinyarada iyo warbaahinta, kuwaas oo mowduuc waliba uu wato faahfaahin ku saabsan qorshayaasha horumarineed iyo wax-ka-beddel ee xisbigu ku samaynayo.
Amniga iyo Nabadda; oo u sii kala baxa, Amniga gudaha, cuqaasha dhaqanka, amniga dibadda.
Dhaqaalaha; oo kala ah, la-dagaallanka saboolnimada, miisaaniyadda, siyaasadda cashuuraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo qaybo badan ka sii kooban, si qoto dheerna looga sii hadlay.
Garsoorka iyo Caddaaladda; oo ka kooban, Horumarinta hannaanka caddaaladda iyo garsoorka, Dastuurka, dib-u-habaynta shuruucda dalka, caddaaladda carruurta iyo xabsiyada.
Siyaasadda Arrimaha Dibadda; waxa hoos ku jira qodobo kala duwan sida:
Horumarinta Maamul-wanaagga; waxa hoos imanaya qodobadan hoose oo mid kasta sharraxaad badan wato.
Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada;
Wasiirka caafimaadka iyo wefti uu hogaaminayo JSL oo gaadhay laascaanood
Guddomiye ku xigeenka cusub ee baanka JSL ayaa maanta xilkii…
Waa Kuwaa Dawladaha La Kala Saftay Kiiskii Badda ee u…
Deg Deg Ardayda Dugsiga Faarax-Omaar oo Gadood Sameeyay iyo Waxa…